भारत–पाकिस्तानबीच गृहयुद्ध कि जिस्काउने उपाय ?
२०७३ असोज १४ शुक्रबार, नयाँदिल्ली । भारतले बुधबार र बिहीबार राति गरी कश्मीरको पाकिस्तानको कब्जामा रहेको क्षेत्रमा तीन किलोमिटर भित्रसम्म प्रवेश गरी सात क्याम्प ध्वस्त पारिदिएको छ । सो क्रममा ३८ जनाको ज्यान लिएको छ । स्थानीय समयअनुसार राति १२ः३० देखि बिहान ४ बजेसम्म अप्रेशन गरी भारतीय सेना पुनः सीमामा तैनाथ भएको छ । भारतको यो क्रियाकलापको भारतभित्रै पनि आलोचना भएको छ । अहिले आएर किन किन आक्रामण गर्नुपरेको भनेर । अर्थात् उडी आक्रमणमा १ ... बाँकी अंश»
अमेरिकामा भयानक रेल दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १०८ घाइते
२०७३ असोज १४ शुक्रबार, न्युयोर्क । अमेरिकामा भयानक रेल दुर्घटना भएको छ । न्युयोर्कबाट न्युजर्सीका लागि छुटेको रेल हेबोकनमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने १०८ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको न्युजर्सी रेल स्टेसनका प्रवक्ता जेनिफर नेलसनले जनाएका छन् । एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार रेल र स्टेसनको पर्खालमा च्यापिएकी महिलाको मृत्यु भएको हो । घटनापछि हेबोकन रेल स्टेसनबाट सम्पूर्ण रेलसेवा बन्द गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
चीनको कुनमिङ नजिकै १९ व्यक्तिको हत्या
२०७३ असोज १३ बिहिबार, साङघाई (चीन) । चीनको प्रहरीले बिहीबार १९ जनाको हत्या गरेको आशङ्कामा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । युनान प्रान्तको कुनमिङ सहर नजिकैको एक गाउँका २६ वर्षीय याङ क्वीनपेईले आफ्नै गाउँका १९ जनालाई बुधबार राति आक्रमण गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । चीनको राष्ट्रिय समाचार संस्था सिन्ह्वाले बिहीबार बिहानै १९ जना गाउँले उनीहरुकै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका जनाएको थियो । मृतकमध्ये ११ जना पुरुष र आठ जना महिला रहेको बत ... बाँकी अंश»
थप सैनिक पठाउन इराकद्वारा अमेरिकालाई आग्रह
२०७३ असोज १३ बिहिबार, बग्दाद । आफ्नो मुलुकमा थप अमेरिकी सैनिक प्रशिक्षक र सल्लाहकार पठाई सहयोग गर्नका लागि इराकले वासिङटनलाई आग्रह गरेको छ । हाल इस्लामिक स्टेट आतङ्कबादी समूहको कब्जामा रहेको इराकको दोस्रो ठूलो सहर मोसुललाई इस्लामिक स्टेटको कब्जाबाट मुक्त गर्नका लागि सहयोगको आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार जानकारी दिएको छ । मोसुललाई मुक्त गराई पूर्णतः सरकारी अधिनमा ल्याउन इराकी सुरक्षा बललाई सामरिक सल्लाह, सुझाव र तालिमका लागि पर्याप्त कुशल र ... बाँकी अंश»
भारत र पाकिस्तान सेनाबीच गोली हानाहान, २ पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु
२०७३ असोज १३ बिहिबार, एजेन्सी । भारत सिमावर्ती क्षेत्र जम्मुकाश्मिरमा बिहीवार भारतीय र पाकिस्तानी सैनिकबीच गोली हानाहान हुँदा कम्तिमा पनि दुई जना पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानी संचार माध्यमका अनुसार बिहीवार विहान २ः३० बजेबाट सुरु भएको दोहोरो भिडन्त कम्तिमा पनि चार घण्टा सम्म चल्यो । यता भारतले पनि विहिबारको दोहोरो हमलाबारे पुष्टि गरेको छ । भारतले विहिबारको हमला राष्ट्र रक्षाको लागि गरेको भारतीय सैनिक बल डिजीएमओका लेफ्टेनेन्ट जनरल रनवीर सिं ... बाँकी अंश»
चीनले ग्रेटवाल मुनि रेलवे स्टेसन बनाउने
२०७३ असोज १३ बिहिबार, एजेन्सी। चीनले विश्वको सात आश्चर्य मध्यमा पर्ने ग्रेटवालको मुनि गहिरो, ठूलो र द्रुत गतिको रेलवे स्टेसन निर्माण गर्ने भएको छ। चीनले आफुले आयोजना गर्ने सन् २०२२ को हिउँदे ओलम्पिकको पूर्वतयारीलाई लिएर सो रेलवे निर्माण गर्न लागेको त्यहाँको राज्य मिडियालाई उद्रित गर्दे रोयटर्सले जनाएको छ। उक्त स्टेसन राजधानी बेजिङदेखि ८० किलोमिटर उत्तरी पश्चिममा रहेको ग्रेटवालको बढी घुमिने खण्ड बडलिङमा निर्माण हुनेछ । चीन राष्ट्रिय पर्यटन प्रशासनका अनुसा ... बाँकी अंश»
सार्क बैठकमा भाग नलिनेमा अफगानिस्तान पनि, बैठक हुनेमा नेपाल विश्वस्त रहेको भन्दै भारतमा चर्चा
२०७३ असोज १२ बुधबार, काठमाडौं । पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने भनिएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने मुलुकको विषयलाई लिएर भारतमा सनसनी फैलिएको छ । यसअघि भारत, बंगलादेश र भुटान सहभागि नहुने भनेकामा अब अफगानिस्तान समेत थपिएको चर्चा भएको छ । भारतीय संचारमाध्यले यी चार मुलुकले सार्क शिखर बैठकमा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिइसकेको उल्लेख गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी सेवाको अनलाईन पोर्टलले अहिले अध्यक्षता गरिरहेको नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयका सह–सचिव ... बाँकी अंश»
रहेनन् नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता तथा इजरायलका पूर्वराष्ट्रपति शिमोन पेरेज, विश्व समुदायबाट दु:ख व्यक्त
२०७३ असोज १२ बुधबार, इजरायल । नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता ईजरायलका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री शिमोन पेरेजको बुधबार निधन भएको छ । दुई साता अघिदेखि सिकिस्त विरामी भएका पेरेजको ९३ वर्षको उमेरमा स्थानीय समयअनुसार विहान ३ बजे निधन भएको पेरेजका छोरी–ज्वाइँ रफी वालडेनले बताए । पेरेज दुई पटक प्रधानमन्त्री र एकचोटि राष्ट्रपति बनेका थियो भने जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि सक्रिय राजनीतिज्ञकारुपमा क्रियाशिल थिए । प्यालेस्टिनीसँग शान्ति सम्झौता गराउ ... बाँकी अंश»
अफगानिस्तानमा अमेरिकी हवाई हमला, १८ को मृत्यु
२०७३ असोज १२ बुधबार, एजेन्सी । अफगानिस्तानमा चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसविरुद्ध गरिएको अमेरिकी हवाई हमला परी कम्तिमा पनि १८ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अधिकांश विद्रोही रहेपनि केही स्थानीय समेत रहेका हुनसक्ने एक अफगान अधिकारीलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । नानगाहरमा वुधवार भएको सो हमलामा परी मर्ने मध्ये १५ जना विद्रोही पक्षका र ३ जना स्थानीय रहेको अचिन जिल्लाका प्रहरी प्रमुख महमद अलीले जनाएका छन् । कावुमा रहेको अमेरिकी स ... बाँकी अंश»
अस्ताए इजरायलका पूर्व राष्ट्रपति सिमोन पेरेस
२०७३ असोज १२ बुधबार, काठमाडौ । इजरायलका पूर्व राष्ट्रपति सिमोन पेरेसको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पेरेसको बुधवार टेल अभिवस्थित अस्पतालमा निधन भएको हो । पेरेस इजरायलका लागि दुईपटक प्रधानमन्त्री र एकपटक राष्ट्रपति भएका थिए । इजरायललाई नयाँ राष्ट्रको रुपमा स्थापित गराउन पेरेसको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । पेरेसले सन् १९९४ मा नोबल शान्ति पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन् । १९९० को दशकमा पेलेस्टाइनसँग शान्ति विस्तार गर्नका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन पे ... बाँकी अंश»
नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेजको निधन
२०७३ असोज १२ बुधबार, काठमाडौं । नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित इजरायलका पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेजको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । दुर्इ साता पहिले हृदयाघात भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएका शिमोनको मंगलबार निधन हुनुअघि स्वास्थ्य सुध्रिएको अस्पतालले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । इजरायलको स्थापना कालका राजनेताहरूमा अन्तिम पेरेज दुर्इ पटक प्रधानमन्त्री र एक पटक राष्ट्रपति भएका थिए । उनलार्इ ओस्लो सम्झौताबाट प्यालेस्टाइनमा शान्ति स्था ... बाँकी अंश»
क्लिन्टन र ट्रम्पबीच जुहारी, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप
२०७३ असोज ११ मंगलबार, एजेन्सी । आगामी नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावअघि भएको पहिलो प्रत्यक्ष बहसमा डेमोक्र्याटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टन र रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पबीच जुहारी चलेको छ । जुहारीमा दुवैले एक अर्काको चर्को आलोचना गरेका छन्। मंगलबार भएको उक्त बहस अर्थतन्त्र, कर प्रणाली, जातीगत मुद्दा र सुरक्षामाथि केन्द्रित थियो । यद्यपि, बहसका क्रममा क्लिनटनले बोलेका कुरालाई ट्रम्पले रोक्न खोजेका थिए । क्लिन्टनले उक्त बहसको तयार ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज ११ मंगलबार, कोलम्बिया । कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्धको अन्त्य भएको छ । सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएसंगै ५२ वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धको अन्त्य भएको हो । राष्ट्रपति जुवान म्यानुअल सान्तोष र फार्क विद्रोहीका नेता तिमोलियो जिमेनेजले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा शान्ति झल्काउन सबैले सेतो पहिरन लगाएका थिए भने गोली आकारको कलमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । हस्ताक ... बाँकी अंश»
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना राज्यको कफ्र्यु हटाइयो
२०७३ असोज १० सोमबार, वासिङटन। अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना राज्यको सार्लाोट महानगरमा जातीय रङ्गभेद भड्किई उत्पन्न भएको व्यापक हुलदङ्गा र अनियन्त्रणिय हिंसाका कारण गतः बिहीबारदेखि लगाइएको कफ्र्यु स्थानीय समयाअनुसार आइतबार रातिबाट हटाइएको छ । कफ्र्यु हटाइए तापनि विरोध प्रदर्शन भने महानगरभरी छैठौँ दिनसम्म पनि जारी नै रहेको छ । गतः मङ्गलबार अफ्रिकी मूलका एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक किथ लामोन्ट स्कटलाई नर्थ क्यारोलिना प्रहरीले प्रहार गरेको गोलीबाट मृत्यु भएको थि ... बाँकी अंश»
जापानमा ६ रेक्टरको भूकम्प
२०७३ असोज १० सोमबार, हङकङ्। जापानमा सोमबार ६.० रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था (युएसजिएस)ले जनाएको छ । सो भूकम्पको केन्द्रविन्दु जापानको नागो प्रान्तबाट ११३ किलोमिटर टाढा सामुद्रिक सतहबाट ४०.२५ किलोमिटर गहिराईमा रहेको छ । भूकम्पबाट हालसम्म मानवीय र भाैतिक क्षतिको कुनै समाचार प्राप्त भएको छैन । भूकम्पबाट के कति क्षति भएको हो र यसको विस्तृत विवरण प्राप्त भईनसकेको समाचारमा बताइएको छ । सिन्ह्वा ... बाँकी अंश»
पाकिस्तान भारतसँगको भावी सम्बन्धमा सकारात्मक छ: पाकिस्तानी उच्च आयुक्त
२०७३ असोज १० सोमबार, काठमाडौं। उरी हमलापछि भारत र पाकिस्तान उग्र बन्दै गएको अवस्थामा भारत स्थित पाकिस्तानी उच्च आयुक्तले अवस्था थप उत्कर्षमा नपुगोस भनी सकारात्मक अभिव्याक्ति दिएका छन् । पाकिस्तानी संचार माध्यमसँग कुरा गर्दे पाकिस्तानी अबदुल बासितले पाकिस्तान भारतसँगको भावी सम्बन्धमा सकारात्मक र रचानात्मक रहेको बताएका छन् । सयुक्त राष्ट्र संघमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तान पटक-पटक भारतसँग पारस्पारिक सम्बन्ध कायम गर्न र सबै समस्याको हल ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज १० सोमबार, अम्मान । जोर्डनका प्रसिद्ध लेखक तथा व्यङ्ग्य चित्रकार नेहद हेतार कार्टुनिस्टलाई जोर्डनको एक अदालत परिसरमा आइतबार गोली हानी हत्या गरिएको छ । उनलाई इस्लाम धर्मविरोधी व्यङ्ग्यचित्र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा थियो । उनीमाथि लागेको आरोपमाथि अदालतमा तारिख बुझ्न त्यहाँ पुगेका बेला अज्ञात व्यक्तिले तीनवटा गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएको जोर्डनको सरकारी समाचार संस्थाले जनाएको छ । दाह्री प ... बाँकी अंश»
ओबामाद्वारा अफ्रिकी-अमेरिकी सङ्ग्रहालयको उद्घाटन
२०७३ असोज ९ आइतबार, वासिङटन (अमेरिका)। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शनिबार अफ्रिकी मूलका अमेरिकीको इतिहास र संस्कृति बोकेको सङ्ग्रहालयको वासिङटनमा शनिबार उद्घाटन गरेका छन् । अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति ओबामाले उद्घाटन गरेको सो सङ्ग्रहालयले अफ्रिकी मूलका अमेरिकीको इतिहास र संस्कृतिलाई झल्काउने बताइएको छ । उक्त सङ्ग्रहालय भवन वासिङगन नेसनल मलको परिसरमा झन्डै ३७ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलमा बनेको छ । यद्यपी सङ्ग्रहालयको उदघाटन कार्यक्रममा ... बाँकी अंश»
पाकिस्तानले भारतलाई यस्तो जवाफ फर्कायो ?
२०७३ असोज ९ आइतबार, एजेन्सी । पाकिस्तानले कश्मिरमा भइरहेको अत्याचारबाट चोखिन भारतले आफ्ना बारेमा दुश्प्रचार गरेको आरोप लगाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दे भारतले पटक–पटक पाकिस्तानलाई आतंकवाद फैलाएको आरोप लाएपनि त्यसको पाकिस्तानले सधैं खण्डन गर्ने गएको बताएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार केरेलास्थित एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पाकिस्तानीविरुद्ध अभियानलाई थप उजागर गर्ने किसिमको उत्तेजक अभिव्याक्ति प्रकट ... बाँकी अंश»
चीनमा खडेरीबाट करिब २ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित
२०७३ असोज ९ आइतबार, वुहान (चीन)। मध्य चीनको हुवेई प्रान्तमा खडेरीका कारण करिब दुई लाख ३७ हजार मानिसमा खानेपानीको अभाव भएको हुवेईका स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् । सामान्यतया यहाँ पर्ने गरेको औषत वर्षाको करिब १० प्रतिशत मात्र वर्षा यस क्षेत्रमा भएको स्थानीय अधिकारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शनिबार बताए । हुवेईको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित सियान र इचाङ सहरमा वर्षा नहुँदा यहाँका खानेपानीका स्रोतहरु सुकेपछि पानीको अभाव देखिएको हो । उक्त स ... बाँकी अंश»